Kenya oo sii daysay Hawlfuliyihii ugu waynaa Weerarkii Kulbiyoow ee looga laayay Askarta badan+Xog Sirdoon – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jun 21, 2017
Dawladda Kenya ayaa Xabsi ku yaala Wadankeeda ka sii daysay Hawl Fuliyihii ugu waynaa ee Weerarkii Kulbiyoow ee Billowgii Sannadkan Kenya looga laayay Askarta Badan. Waxaana Hawl Fuliyahan oo lagu magacaabo Faysal Yuusuf Aadan uu u sheegtay Sirdoonka Kenya inuu ahaa Xoola Dhaqato ku waxyeeloobay Weerarkaasi, iyadoona kadib markii ay muddo ku hayeen Xabsi Gudaha Kenya ah Dhawaan iska soo daayay.
Xog Sirdoon oo ay heshay Hornafrik waxay sheegayaan in Faysal uu ahaa Ismiidaamiyihii ugu horeeyay ee waday Gaarigii 1aad ee isku qarxiyay Kulbiyoow, Laakiin Awoodda Qaraxa iyo isagoo waqtigiisii ay wax ka dhimanaayeen ayuu ku dhacay meel duur ah isagoo dhaawac ah. waxaana kadib halkaasi ka soo helay Ciidamadda Kenya oo baadi goobanaya Firxadka Askartooda.
Alshabaab oo diyaariyay Muuqaaladda Faysal si ay u baahiyaan ayaa markii ay ogaadeen Xogta ah in la qabtay isagoo nool waxay hakiyeen Muuqaaladaasi, taasoo ka saaciday Faysal inay ku adkaato Kenya inay aqoonsato qofka saxda ah ee uu yahay. Waxaana kadib Waraysiyo kala duwan oo ay ka qaadeen Sirdoonka Kenya ay u aqoonsadeen inuu yahay Nin aan dambi lahayn.
Faysal Yuusuf Aadan waxaa sidoo kale horay u xirtay Dawladda Somalia, kadib markii lagu qabtay Muqdisho isagoo fulinaya Weeraro Argagixisanimo, Laakiin Faysal oo ah Nin aan si fudud lagu ogaan karin waxa uu samaynayay ayaa inkiray inuu Alshabaab ka mid ahaa, kadibna waxay Dawladdu ku xukuntay 4 Sanno oo Xabsi Ciidan, taasoo markuu soo dhamaystay Xukunka loo wareejiyay Xeradda Dhaqan Celinta Sariinda.
Faysal waxa uu ka mid noqday 148 Qof oo markii ay Xukunka dhamaysteen ay isla garteen Maxkamadda Ciidanka iyo Taliska Asluubta inaan lagu sii dayn karin Magaaladda oo aysan ka tanaasulin Afkaartoodii Argagixisanimadda, kadibna waxaa la isla gartay in lagu wareejiyo Xeradda Dhaqan Celinta ee Sariindi, halkaaso oo muddo kadib laga sii daayay, waxaase mar kale laga soo qabtay Magaaladda Dhexdeeda isagoo looga shakiyay hawlo Argagixisanimo waxaana dib loogu celiyay isla Xeraddii Sariindi. Waxaase halkaasi ka sii daayay Wasiirkii Hore ee Amniga Somalia oo soo saaray Amar ah inaan la keeni karin Xero Sariindi Qof la soo xukumay ama la soo xiray, taas badalkeedana loo oggolyahay Xeradaas oo kaliya qofka isaga oo Alshabaab ah toos u yimaada Xeradaasi oo ay maamulaan Sirdoonka Ingiriiska.
Faysal oo kaliye ma ahan Dadka laga sii daayay Xabsiyadda ee kadib is qarxiyay ama fuliyay Weeraro waawayn, inta badan Hawl Fuliyayaasha Weeraradda Argagixisanimo waa kuwa soo maray Xabsiyadda Dawladda Somalia ama kuwa Dalalka Deriska ah.
Madaxa Guutadda Alshabaab ee fulisa Weeraradda qorshaysan ee lala beegsado Xeryaha Ciidamadda waxaa lagu magacaabaa Naaleeye, waa Nin muddo dheer ku xirnaa Xabsi Wadanka Itoobiya ah, isagoo loo haystay Weeraro dhawr ah oo ka dhacay Gudaha Kenya. Waxaana uu haatan yahay Shaqsiga ugu saamaynta badan Kooxda Alshabaab.
Ninkii lahaa dhaxalka boqortooyada Sacuudiga oo la eryey iyo Wiilka Boqorka oo Dhaxal Suge loo magacaabay.